Zvaunofanira kuita kana yako iPhone isinga batane neWi-Fi | IPhone nhau
Zvaunofanira kuita kana yako iPhone isingabatanidze kune Wi-Fi
Nhasi zvakaoma kufungidzira hupenyu husina Wi-Fi. Mazuva ano tinoshandisa nguva yese yakabatana nevatinozivana navo uye tichitarisa pamapeji ewebhu kuti tizvichengetedze isu pese pane zvese. Ndokusaka kubatana kweWi-Fi kwave kuve kwakakosha chikamu chehupenyu hwedu. Asi chii chinoitika kana tisingakwanise kubatana needu iPhone, iPod Touch kana iPad? Pachinhu chidiki, tinotsamwiswa. Muizvi pambiru isu tichakudzidzisa zvekuita kana iPhone isinga batane neWi-Fi sezvainofanirwa, kunyange hazvo muzviitiko zvakawanda isiri yavo mhaka.
Muzviitiko zvakawanda, dambudziko rine mhinduro iri nyore, saka hazvina kukodzera kuti ushatirwe nehasha. Pamazano anotevera pachave nezvimwe zvakakosha, asi isu tichavaisa vese ku Ongorora zvese zvingangodaro. Une matipi ese pazasi.
1 Iwe uri mukati mechiratidzo here?
2 Wi-Fi iri pamusoro here?
3 Inhare yako yeWi-Fi yakanyorwa mumamiriro ezvinhu here?
4 Tarisa tambo dzese
5 Reset zvese
Iwe uri mukati mechiratidzo here?
Sezvatakambotaura, Wi-Fi yatove chikamu chehupenyu hwedu, asi ini ndingati vazhinji routers vachiri kushandisa yechinyakare tekinoroji. Ini ndinoti "chinyakare" nekuti hazvishande kwatiri. Semuenzaniso, kana tikashandisa a router izvo hazvibatanidze nemadziro rimwechete pakati, hazvitishandire uye isu tinogona kutaura kuti iyo router haichashandi.
Kuti uzive kana chiratidzo ichi chakanaka kana kwete, ingo tarisa kumusoro kuruboshwe, kwaunogona kuona icon senge iri mumusoro wemufananidzo. Ini ndingati kana iwe ukangomaka chete tambo hatigone kuve nechokwadi chekuti tiri mukati meiyo yekubatana kweWi-Fi. Kubva pamutsara wechipiriEhe, isu tinogona kufunga kuti isu tinogona kusvika. Izvo zvakakoshawo kutaura kuti kana tikasaona iyo Wi-Fi icon uye isu tichiona 3G, 4G kana LTE, isu hatina kubatana kune yedu isina waya netiweki, asi kune yedu mbozhanhare dhata data.
Wi-Fi iri pamusoro here?
Dzimwe nguva tinodzima Wi-Fi uye chimwe chezvikonzero chingave chekuchengetedza bhatiri. Zvine musoro, kana isu tine Wi-Fi yakatemwa hatizokwanise kuyananisa nayo. Kuti utarise kuti isu takabatana here, ingosimudza iyo Kudzora nzvimbo uye ngatione kana iri nechena kumashure.
Pane iPhone 6s kana iPhone 6s Plus ine iOS 9.3 kana gare gare tinogona kuita chiratidzo 3D Touch Dzvanya paMenu yekushandisa icon uye sarudza Wi-Fi, iyo inotibatsirawo nekukurumidza kuwana chikamu chayo uye ona kana isu takabatana kunetiweki yatinoda kuwana. Nehuwandu hwemasaini asina waya aripo nhasi, tinogona kugara takabatana kunetiweki iyo kubatana kwayo "kwakavhurika", asi inoda password (saOno Wi-Fi).
Inhare yako yeWi-Fi yakanyorwa mumamiriro ezvinhu here?
Kana iyo iPhone, iPod Kubata, kana iPad isingakwanise kuona zita renetiweki, dambudziko rinofanirwa kunge ratove neiyo router. Kuti uone kana iwe uchikwanisa kuona network yatinofanira kuwana Zvirongwa / Wi-Fi (kana 3D Bata chiratidzo uye sarudza Wi-Fi) uye uone kana tichiona zita renetiweki yatinoda kubatana nayo. Kana ikasaoneka, zvinokwanisika kuti, nekuda kwechimwe chikonzero, paive nekuchekwa muchiratidzo. Iyi ndeimwe yemabugs yatisingadi isu kuona, asi inowanzo gadziriswa neayo ega kutangazve iyo router.
Kune rimwe divi, kana paine vazhinji vedu vanobatana netiweki imwechete, panogara paine mukana wekuti mumwe munhu achinja shanduko yayo. Kana mumwe munhu akagadzira iyo router usashambadze SSID yako (zita rako) hatisi kuzoona zita renetiweki yako. Chinhu chakajairika ndechekuti dai isu tanga takabatana kare isu tatova nezvirongwa zvakachengetedzwa, asi zvinogona kurasikirwa nehukama uye isu tinofanirwa kubatana zvakare. Kana zvirizvo, isu tichafanirwa kuwana Zvirongwa / Wi-Fi / Zvimwewo uye wedzera zita rako (repamusoro uye repasi kesi), chengetedzo mhando uye password.
Tarisa tambo dzese
Tingave takakanganisa kana isu tichifunga kuti zvese zvakanaka nekuti zvese zvigadziriro zvakanaka. Hardware inogona zvakare kuita basa rakakosha. Zvinogoneka kuti yedu iPhone, iPod Kubata kana iPad yakabatana ne router nenzira kwayo uye isu hatigone kuwana iyo Internet nekuti iyo router haina kubatana kune internet. Izvi zvinogona kuitika kana iyo router Yakavharirwa mune inobuda magetsi, asi yayo tambo tambo yakaburitswa kunze kwayo inoenderana chiteshi kana iko kubatana kwakambodonhedzwa. Mune zviitiko izvi, zvakanakira ku:
Tarisa tambo dzese.
Tarisa kuti tinokwanisa here kuwana Indaneti nezvimwe zvishandiso.
Kana isu tese tambo dzakatsetseka uye tisingakwanise kubatana nechero mudziyo, zvinokwanisika kuti mutyairi wedu haatipe Internet panguva iyoyo. Kushivirira kana kuita zvinotaurwa nepfungwa inotevera.
Kana zvese zvikaita sezvakanaka uye zvichifanira kushanda, tinogona kugara tichiedza reset zvese, rzvekunze, iPhone uye chero chimwe chinhu chakabatana netiweki chinogona kunge chiri kukonzera dambudziko.
Kune rimwe divi, kana dambudziko rikaramba riripo pane yedu iPhone, iPod Kubata kana iPad, tinogona zvakare reset marongero enetiweki kubva Zvirongwa / General / Reset kutanga zvese kubva pakutanga. Kana tikadaro, isu tichafanirwa kuisa zvakare iyo data kune ese maWi-Fi manetwork, asi zvinogona kunge zvichikosha kana tikakwanisa kubatanidza.
Wakave uine dambudziko here nehukama hwako hweWi-Fi uye wakakwanisa kuigadzirisa? Inzwa wakasununguka kusiya chako chiitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Zvaunofanira kuita kana yako iPhone isingabatanidze kune Wi-Fi
Sezvo ini ndakagadzirisa yangu iphone 4s kusvika ios 9, iyo wifi neBluetooth hazvibatanidze ivo vachena musoro, ini ndakaedza kutangazve, kudzoreredza, nezvimwe uye ini ndichine dambudziko rakafanana.
Kana iwe uine dambudziko iri pane yako iPhone, mamiriro acho haasisiri eayo software asi ye Hardware. Chikamu chinoda kutsiviwa.
Kana pasina imwe mhinduro ini ndichafanirwa kutsungirira nazvo, ndatenda nemhinduro
Ini handifunge kuti dambudziko iri Hardware, chinhu chimwe chakaitika kwandiri, sezvo ini ndichigadzirisa iyo ios 9.3.1 Ini handigone kubatana neWi-Fi. Pane dambudziko neiyo ios.
Chaizvoizvo kana ndichigadzirisa ndisati ndaenda perf asi sezvo ini ndisingakwanise kurodha ios vhezheni
Jairo Mc akadaro
Ini ndinokupa iwe kuraira kwandiri ini zvakaitika kamwe ne4s yandaive nayo uye ndikazvigadzirisa! Edza kudzvanya iyo Kumba & yekukiya bhatani pamwechete uye painotangazve, apuro rinowoneka, kiyi inowoneka, uye siya bhatani repamba rakadzvanywa kusvikira rakwira! kana isina kugadziriswa ps !! Tsvaga blower uye pisa mudziyo nekuisa blower kuburikidza nekiyi bhatani kusvikira ichikuudza kuti iyo tembiricha yakanyanya kwazvo ipapo ichagadziriswa !!!
Pindura Jairo Mc
Ndakaedza kuomesa bvudzi uye chokwadi ndechekuti nemashiripiti ikozvino iyo Wi-Fi neBluetooth zvinoshanda, ndinovimba zvinogara, ndinokutendai zvikuru
Sezvo ini ndakagadziridza kuIOS 9.3.1 pane iPhone 6, iyo wifi icon haioneke mubhawa yepamusoro, kunyangwe iyo internet ichishanda asi iyo icon isingaoneke, uye kana ndine 4g uye wifi yakaomeswa, sisitimu inosarudza kushandisa 4G! ! Saka ini ndapedza data rese nezuva rimwe chete, ko chihure.
mamwe matambudziko ndeekuti ndine matambudziko ebhatiri kubvira IOS 9 uye ichiwedzera kuipa, handizive kana shanduko yebhatiri ndiyo yakanyanya kunaka, asi iine 16gb yandinayo ndoda kuti ndibate iyo 64 gb SE, chitsamba: apo ios 9.3 yakabuda ndakaidzorera sefekitori isina backup, handichaziva zvekuita kuti iphone iende sezvazvinofanira!
Ini ndakagadzirisa yangu iphone 6s + kuenda kubva kuIos 9.2.1 kuenda kuIos 9.3.1 uye ini ndakaona kuti bhatiri raidya nekukurumidza uye ini ndakarimisa kuti ive nyowani uyezve zvandakaita kurodha pasi kune vhezheni 9.2.1 apple isati yamira kubva kusaini 🙂
Ini ndaifanira kuchinja iyo IPhone 5 nekuti yakamira kubatana neWifi painogadzirisazve marongero eNetwork.
Iyo iPhone yainge ichirasa siginecha uye ndaifanira kuiseta asi izvi zvaive zvakanyanya nekuti haina kuzombodzoka.
Ndakaita zvese zvandaigona kuti ndibatanidzane asi paive pasina nzira.
Ini ndakatoidzosera se iPhone nyowani asi hapana.
Ndine iyo yakachengetwa mubhokisi risina kushandiswa.
Kana paine munhu anogona kundibatsira ini ndingafarire, ndatenda.
Nzira chete yekuigadzirisa ndeyokuenda nayo kuchitoro cheApple, vanozotarisa yako iPhone vokuudza kuti chikamu chipi chisiri kushanda.
IPhone yangu payakamira kubata WiFi ndakaita izvo, uye chikamu chacho chakangondibhadharira makumi mairi.
Ndinovimba zvinokubatsira 😉
Chidimbu chipi chawatsiva?
Jose Luis Quintana G (@QuintanaGJL) akadaro
Ndanga ndichiedza kugadzirisa wifi kwemaawa, ini ndakadzorera, kudzima, kuvandudzwa uye pakupedzisira "Jairo Mc" verenga kuraira kwako kwekuchenjera, ndakashandisa yekuomesa bvudzi kwemasekonzi matatu uye voila !!!! ... yakabatana neWIFI! !!!
Pindura kuna José Luis Quintana G (@QuintanaGJL)
Ndine iPhone 5 uye haina kubatana newifi… unogona kundipa rairo yako?
Wakashandisa sei dryer?
SySy Xm (@SySyBooM) akadaro
Ndinokutendai zvikuru… Akanga atopinda mumamiriro ekupererwa nezano rose. Ini ndakatevera nhanho dzese, kugadzirisa uye wala dambudziko rakagadziriswa. Ndatenda
Pindura kuSySy Xm (@SySyBooM)
Ndakaita matanho ese akaratidzirwa kwandiri.
Dambudziko neangu iPhone (6) nderekuti haina kunyoresa CHEMA wifi network, hapana maratidziro ekusarudza; Haisi dambudziko renetiweki sezvo nharembozha isinganyore imba yangu, basa rangu kana hunyanzvi hwangu.
Ndakaedza kutangazve foni uye kumisazve marongero enetiweki, uye haina kudaro. Ini handizive zvimwe zvekuita.
IZVI ZVAKAITIKA KUNAI ndibatsire
Mhoroi, ndine iPhone 7 uye zvese zvaifamba zvakanaka, kusvika mazuva mashoma apfuura ndisingakwanise kubatanidza kune yangu yepamhepo netiweki, zita renetiweki rinowoneka pachigadzirwa, ini ndadzoreredza zvese router, modem nefoni yangu. Mamwe majaira ese ari mumba mangu anosanganisira macbook anobatana zvakajairika, asi, pandinobatanidza nharembozha ndichangobatanidza iyo inodimbura, iyo wifi icon iri pamusoro haioneke kunyangwe ichiti yakabatana mupaneru rezvirongwa zvemambure. Zvandinogona kuita?
Silvia Marchetti akadaro
haha zvinoshamisa! ita chinhu pamusoro pebvudzi rinoomesa pane bhatani rekiyi (iyo yakatenderera kumberi) !!! zvinoshamisa asi ichokwadi!
Pindura Silvia Marchetti
YANGU IPHONE INOBATA KUNE INTERNET ASI HAINA CHIKANGANISO CHOKUTAURA ZVAKAITIKA, Batsira
MIGUEL NGIROZI TRUJILLO CRUZZ akadaro
CHIRATIDZO CHERUVARA chinowanikwa padhuze nezita re network, kozoti PADIKI, kozoti HORIZONTAL CURBED LINES sign uyezve iyo ADMIRATION SIGN IN A CIRCLE, asi kukona yekumusoro kuruboshwe kwechiratidziro, mitsara yakatetepa yakakombama ASINA kuoneka zvakabatana; ndoita sei ?.
Pindura MIGUEL ANGEL TRUJILLO CRUZZ
Mune dzimwe nzvimbo ndinogona kubatanidza uye mune dzimwe kwete, vanofunga kuti chimwe chinhu chiri kufamba parunhare mbozha MUMUBVUNZO WEMUDZIMAI
Mhoroi, ndine iphone 8 uye haina kubatana neiyo imba wiffi. Ini ndadzoreredza zvese uye muGeneral marongero ndadzosera network uye ichakamirira network.
Ini ndinobvunza, vakandipa iPhone 6, yakadzoreredzwa, apo musikana akandipa anoisa chip yake kana akamupa mukana wekusarudza wifi kana foni ichangotanga, asi pandinoisa chip yangu paari, iye haindipe sarudzo yeWi-Fi, uye pandinenge ndichida kuzviita kuburikidza nerunhare mbozha, haindibvumidzewo, ndiko kuti, handikwanise kuenderera ndichimisikidza, kana iwe uchikwanisa kundibatsira ini ndingazvikoshese, kwaziso
Josué Carbajal. akadaro
Mhoro, unogona kundibatsira? Ini ndatoita yega ye "mhinduro" uye nanhasi haina kubatana. Ini fekitori ndinodzoreredza iyo iPhone uye ndakaedza kudzorera zvinhu zvangu uye boom! iyo inodimbura zvakare. Haisi dambudziko reWiFi nekuti ini ndakaedza akasiyana. Ndinoda rubatsiro. Izvi hazvina kuitika gore rapfuura. Ndiyo iPhone 4s.
Pindura Josué Carbajal.
Wilber Lopez akadaro
ndatove ndadzosera maratidziro enetiweki kakawanda uye ndichiri kukwanisa kupinda muwifi network
Ndeipi imwe mhinduro yandingave nayo ...
Pindura Wilber López
Mangwanani akanaka, ndagadzirisa dambudziko, chiratidzo chewifi hachina kubuda nekuti avast VPN yakavharira.